ဆေးပညာစာမေးပွဲ အောင်မလားနှင့် KP ပညာ-၁ – အခါပေး ဗေဒင်
ဆေးပညာစာမေးပွဲ အောင်မလားနှင့် KP ပညာ-၁
akhapaybaydin4Nov 20136Dec 2013 Uncategorized
ဆေးပညာဆိုင်ရာ စာမေးပွဲ အောင် မအောင်မေးလာတာကို တွက်ကြည့်ထားတာပါ။ လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
Name: Dr.PPM Date: 4.11.2013(Mon)
Time: 10:05:22(M.S.T) Given No: 99
Query: Feb; 2014 မှာ ကျင်းပမယ့် ဆေးပညာ စာမေးပွဲ အောင်မလား?
အထက်ပါ Astro Data များကို KP ဇာတာဖွဲ့လျင် အောက်ပါဇာတာကို ရရှိမည်-
1. ၄-တန့် CSL သည် ၄-တန့်၊ ၉-တန့်၊ ၁၁-တန့် ဇာတ်ဆောင်ဖြစ်လျင် စာမေးပွဲအောင်မည်။
2. ၃-င်္ဂါ၊ ၄-ဟူးနှင့် ၅-တေး တို့သည် ၄-တန့်၊ ၉-တန့်၊ ၁၁-တန့် တို့နှင့် ဆက်သွယ်လာခဲ့လျင် စာမေးပွဲ အောင်မည်။
Moon Reveals the State of Mind
အထက်ပါဇာတာတွင် စိတ်ကိုဖော်ပြသော ၂-င်္လာဂြိုဟ်သည် ၁၁-တန့်တွင်ရပ်သော ၅-တေးဂြိုဟ်ပိုင် နက္ခတ်ကိုစီးထားသည်။ ထို့ကြောင့် ၄-တန့်၊ ၉-တန့်၊ ၁၁-တန့်တွင် ၁၁-တန့်နှင့် ငြိသည့်အတွက် မေးမြန်းသူမှာ ရိုးသား၏။ ထို့ကြောင့် ရှေ့ကိုဆက်၍ ဟောရပေမည်။
Primary cusp (4th Cusp)
အထက်ပါဇာတာတွင် ၄-တန့် Sub-lord သည် ၂-င်္လာဖြစ်ပြီး၊ ၁၁-တန့်တွင် ရပ်နေသော ၅-တေးဂြိုဟ်ပိုင် နက္ခတ်ကို စီးထားသောကြောင့် ၁၁-တန့်၏ အားကြီးသော ဇာတ်ဆောင် ဖြစ်လာ၏။ ၅-တေးဂြိုဟ်ပိုင် နက္ခတ်ကို စီးထားသောကြောင့် ၅-တေးနှင့် ဆက်သွယ်ထားလေသည်။
ဆေးပညာဆိုင်ရာ စာမေးပွဲဖြစ်သောကြောင့် ၁-နွေနှင့် တစ်နည်းနည်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရပေမည်။ အထက်ပါဇာတာတွင် ၄-တန့် Sub-lord သည် ၂-င်္လာသည် တူရာသီတွင် ၁-နွေနှင့် ပူးယှဉ်နေသောကြောင့် ၁-နွေသည် ပါဝင်လာပေသည်။
Supporting cusps (9th & 11th Cusps)
အထက်ပါဇာတာတွင် ၉-တန့် နှင့် ၁၁-တန့် Sub-lord များသည် ၀-နေဂြိုဟ်ဖြစ်၍ ၁၁-တန့်တွင် ရပ်နေသော ၅-တေးဂြိုဟ်ပိုင် နက္ခတ်ကို စီးထား သောကြောင့် ၁၁-တန့်၏ အားကြီးသော ဇာတ်ဆောင် ဖြစ်လာ၏။
စာမေးပွဲကျင်းပမည့် Feb; 2014 တွင် ၅-တေး ထူလ၊ ၉-ကိတ် ဘုတ္တိဒသာ စားပေလိမ့်မည်။ ထူလဒသာ ၅-တေးသည် ၁၁-တန့်တွင်ရပ်၍ ၁၁-တန့် တွင် ရပ်သော မိမိပိုင် ၅-တေး နက္ခတ်ကို စီးထား၏။ ဘုတ္တိဒသာ ၉-ကိတ်ဂြိုဟ်သည် ၄-တန့်တွင်ရပ်သော ၆-ကြာဂြိုဟ်ပိုင် နက္ခတ်ကို စီးထား၏။
သေချာပေါက် စာမေးပွဲအောင်မည်။ (No doubt.)
Dear Saya Zarni,
Thanksalot for your reply. First time I asked you about my exam in 2013 sept, in your reply I will pass surely. You are correct, I passed my exam already. I belived your KP astrology. I’ll try my best for my coming year.
Next ဘာစီးပွားရေးလုပ်ရမလဲလို့ တစ်မေးတည်း မေးနေသူများအတွက်-၁
2 Jan 2014 at 12:02 am
ဆရာကျ​နော်​သမီးက ၂၀၁၃ မတ်​လမှာဆယ်​တန်း​ဖြေရမှာပါ
ကျ​နော်​​ပေးတဲ့ ဂဏန်းက 37
ပညာသင်​ရင်​အကျိုး​ပေးမလဲ ဂဏန်း 42
သမီး​မွေး​နေ့က 20.10.1997 တနင်္လာ​နေ့နံက်​ခင်း 01:41:48 နာရီ
Given Number ​တွေကကျ​နော်​​ပေးတာပါ